दाई खोज्दै जाँदा भाइलाइ भेटेपछि….. – Classic Khabar
मोरङमा ७ जनाको ग्याङले घरमै आएर एक युवकको ज्या न लि’ए’का छन् । ति स्थानिय युवाको समुह यस्तै हु’लदं’गा गर्ने समुह भएको एक महिलाले बताएकी छन् । निधन भएका युवकको भाउजुले घटना आफुले देखेको बताइन् । भाई यहाँ बसेको थियो ७ जना ह ‘ति’या’र बो’के’र आए । सुरुमा तीन जना आए । आएर सुसन खोइ ? भनेर सोधे । मैले यहाँ छैन भनेर झुटो बोलिदिए तर उनीहरुले खोज्दै तल गए । तर उनीहरुले सुसन को हो ? भन्दै एउटा युवकलाई बोलाए । तर उसले म सुसन होइन भन्दा भन्दै ति युवकहरुले उनीमाथि नै जा’इला’गे ।
ति युवक सुसन नामका एक युवकलाई खोज्दै आएका थिए तर भाईलाई फेला पारेपछि उनकै ज्या’ ‘न लि’ए । उनी पान खान भन्दै पसलमा बसेका थिए । तर उनीहरुले दिउसै सबैको सामुन्ने ज्या’ ‘न लिएको भाउजुले बताइन् । भाउजुले घटना किन भयो, घटना गराउने को हुन् भन्ने पनि आफुले नचिनेको बताइन् ।
घटना गराएर उनीहरु भा’ ‘गेको ब’ता’इ’न् । घटना गराएर उनीहरु मोटरसाइकलमा भागेपछि मात्र गाउँलेहरु आएको महिलाले बताइन् । घटनामा संलग्न केही पक्राउ परेको भएपनि प्र ;हा;र गर्ने ब्यक्ति नै भने पक्राउ नपरेको उनले बताएकी छन् । निधन हुनेको नाम अभिषेक थारु भएको महिलाको भनाई छ ।
Nextआजै मन्त्रीमण्डललाई पुर्णता दिँदै देउवा, टुंगो लागेका मन्त्रीका नाम यस्तो छ